Ma Jirto Cid Isla Heli Kartaa? Shaxda Kooxda Kubbada Cagta Aduunka Ugu Qiimaha Badan Iyo Haddii Fayraska Aduunka Waalay Uu Hoos U Dhigi Doono. - Gool24.Net
Ma Jirto Cid Isla Heli Kartaa? Shaxda Kooxda Kubbada Cagta Aduunka Ugu Qiimaha Badan Iyo Haddii Fayraska Aduunka Waalay Uu Hoos U Dhigi Doono.
Waxaa la filayaa in qiimo dhac wayni uu ku iman doono suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo qiimaha lagu kala iibsan jiray xidigaha kubbada cagta kuwaas oo heer waali ah soo gaadhay sanadihii la soo dhaafay.
Iyada oo Fayraska aduunka waalay uu saamayn dhaqaale oo xun kaga tagayo kubbada cagta iyo dhinacyada kala duwan ee nolosha, waxaa lays waydiinayaa haddii shaxda kooxda aduunka ugu qaalisani uu qiimo rid badan ku samayn doono.
Shabakada transfermarkt oo ah tan qiimaynta suuqa kala iibsiga iyo qiimaha ciyaartoyda inta ugu badan looga danbeeyo ayaa 11 ka ciyaartoy ee booskasta ugu qiimaha badan waxaa ka soo baxday shaxda aduunka ugu qaalisan.
Afar ciyaartoy oo Liverpool ka tirsan oo kala ah Van Dijk, Robertson, Mohamed Salah iyo Arnold ayaa dhamaantood ka soo muuqday shaxda kooxda aduunka ugu qaalisan.
Manchester City, Juventus, Man United, Chelsea, PSG iyo Atletico Madrid ayaa dhamaantood ciyaartoy ku leh shaxdan halka kooxaha Barcelona iyo Real Madrid oo shaxdan ciyaartoy badan ku lahaan jiray ayna markan wax xidigo ah ku lahayn.
Shaxda kooxda aduunka ugu qaalisan waxaa goolka ugu jira Jan Oblak oo taariikh badan ka soo sameeyay kooxda Atletico Madrid kaas oo lagu qiimeeyay 80 milyan euros.
Afarta difaaca ah waxaa kuwada jira Van Dijk oo 80 milyan euros ku qiimaysan, De Ligt oo 67.5 milyan ah. Alexander-Arnold oo 99 milyan euros ah iyo waliba Andy Robertson oo qiimihiisa lagu sheegay 64 milyan, wuxuuna mid kastaaba ugu qaalisan yahay booska uu ka ciyaaro.
Khadka dhexe ee shaxda kooxda kubbada cagta aduunka ugu qaalisan waxaa kuwada jira Kevin De Bruyne oo 120 milyan euros ku qiimaysan, Pual Pogba iyo Kante oo min 80 milyan euros ah.
Garabka midig waxaa shaxdan ugu jira Mohamed Salah oo ku qiimaysan 120 milyan euros halka Raheem Sterling oo 128 milyan euros ku qiimaysani uu garabka bidix ku jiro waxaana weerarka dhexe hogaaminaya Kylian Mbappe oo hadda loo aqoonsan yahay xidiga aduunka ugu qiimaha badan oo 180 milyan euros ah.
Halkan kaga bogo shaxda kooxda aduunka ugu qiimaha badan iyo mid kastaaba qiimaha uu joogo.
Neymar Jr, Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi oo aan waqtiyo laga waaji jirin shaxda noocan oo kale ah ayaa hadda hoos uga soo dhacay qiimihii ay suuqa ka joogeen iyada oo sababtu tahay in Messi iyo Ronaldo ay da’doodu waynaatay isla markaana uu Neymar hoos uga soo dhacay heerkiisii hore.
Laakiin waxaa la filayayaa in marka uu suuqa xagaagu furmo dhamaadka xili ciyaareedkan uu isbadal wayni ku iman doono qiimaha ciyaartoyda ee suuqa kala iibsiga.